ငါတို့အတွက်ရေးရန် | ကိုရီးယား၏ဆိုးလ်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည်မလိုလားသောဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုကြိုဆိုသည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်, သင်၏ရေးသားထားသောအကြောင်းအရာပေးပို့ပါ write4seoulofkorea@gmail.com.
Seoul of Korea ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကိုရီးယားခရီးသွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုဖော်ပြထားသည်။ သင်၏အတွေ့အကြုံများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ နေ့စဉ်ဘဝပို့စ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
• Authorbox (သို့) အဆုံးသတ်အကြွေးမှာသင့်နာမည်နဲ့ url ကိုမင်းဆီပြန်ပို့ပေးမှာပါ။ အဆုံးအကြွေးသည်သင်၏စာမူ၏အဆုံးတွင်နေရာချထားသည့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏အမည်နှင့် url ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆက်တွဲ link မပါရှိပါ။
•သင်၏ဆောင်းပါး / စာမူကိုကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများတွင်စုစည်းနိုင်သည်။ twitter, facebook, pinterest နှင့် tumblr ။
မင်းရဲ့စာမူ / စာတမ်းပါ:
•သင်၏စာမူ / စာမူသည်စကားလုံး ၅၀၀ မှ ၇၅၀ အကြားရှိသင့်သည်။ မည်သည့်အင်္ဂါရပ်မှစာလုံးများကို ၁၀၀ + စကားလုံးမှစတင်သင့်သည်။
•ပညာရေး၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ ကျေးဇူးပြု၍ စာတမ်းတစ်အုပ်သို့မဟုတ်အဘိဓာန်ကဲ့သို့သောစာကိုမပေးပါနှင့်။
•သင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်လိုအပ်ကြောင်းသင်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကရေးသားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် copyscape ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမပြုမီပြုလုပ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ ရေးသားထားသောအကြောင်းအရာကို plagiarize မပြုလုပ်ပါနှင့်။
•၎င်းကိုဝဘ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာအုပ်တို့တွင်အခြားနေရာများတွင်မရေးသားထားပါ။ သင်၏ရေးသားထားသောအကြောင်းအရာသည် copyscape ကိုဖြတ်သန်းသင့်သည်။ ၎င်းသည် copyscape ကိုဖြတ်သန်းနိုင်လျှင်၎င်းသည်သွားသင့်သည်။
•သင်ဆောင်းပါး / စာမူကိုသင်ကြိုက်မည့်အမျိုးအစားကိုသိပါစေသို့မဟုတ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖန်တီးရန်အကြံပြုပါ။ သင့်ထံမှထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မှမရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကသင့်တော်သည်ဟုယူဆသောအမျိုးအစားတွင်ထည့်ပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကိုပို့ပေးလျှင်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်တင်ပြီး submstheseoulofkorea@gmail.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။ မည်သည့်ရင်းမြစ်ကိုမဆိုအသိအမှတ်ပြုရန်သင်သည် hyperlink များကိုသုံးနိုင်သည်။ အောက်ခြေမှတ်စုများသို့မဟုတ်မှတ်စုများမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တက္ကသိုလ်မဟုတ်ပါ။
•စကားလုံး ၅၀၀ မှ ၇၅၀ - သင်ပုံ ၂ ပုံကိုသင်ပေးပို့နိုင်သည်။
• 1000 + words: ကျွန်တော်တို့ကိုပုံ ၃-၄ ပုံပို့နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့သည့်ဆောင်းပါးတင်ပြမှုပမာဏကြောင့်သင်၏အပိုင်းကိုရရန်တစ်ပတ်အထိခွင့်ပြုပါ။ သင်၏အရေးအသားအပိုင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတာနဲ့သင့်ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏အကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ပို့ပါ write4seoulofkorea@gmail.com
သင်၏ဆောင်းပါး / ပို့စ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ငြင်းပယ်ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အလားတူအရာတစ်ခုခုကိုတွေ့မြင်ပါကသင်၏စိတ်ကူးကိုခိုးယူခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာထိုသို့မဖြစ်သင့်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့စာရေးဆရာတစ်ယောက်တည်းဟာတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်မျိုးတည်းအကြောင်းကိုမရေးသင့်ဘူး။ လူနှစ် ဦး သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောလူပုဂ္ဂိုလ်များထံမှကျွန်ုပ်တို့အားသူတို့၏စာများကိုတင်သွင်းခဲ့သည်မှမဟုတ်ပါ။ သင်၏အကြံဥာဏ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စာရေးသူအမည်အောက်တွင်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ၊ ဒီလိုရိပ်ရတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့ငါတို့အတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူး။
နောက်ထပ်အချို့သောတရားဝင်မွန် JUMBO ဥပဒေ
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများတွင်ထုတ်ဝေရန်သင်၏ဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါကဤouloulkkorea.comသည်သင်၏ဆောင်းပါးကိုအပြည့်အဝထုတ်ဝေခွင့်ပြုရန်သင်သဘောတူပြီး၊ သင်သည်ထိုဆောင်းပါး၏ရေးသားသူဖြစ်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည်သင်၏တင်သွင်းထားသောဆောင်းပါးကိုဤoulofkorea.comနှင့်၎င်း၏လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ထုတ်ဝေသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဤouloulkkorea.comသည်မူပိုင်၊ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်ဆောင်းပါး၏အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအခွင့်အရေးများကိုတစ် ဦး တည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်လာသည်။ ဆောင်းပါး / ပို့စ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေသည့်အခါခရက်ဒစ်ရမည့်ငွေကိုသင်အမှန်တကယ်ရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေရေးရာအကြံပေးကလမ်းပေါ်ရှိဥပဒေရေးရာပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်၎င်းကိုပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ဝေနိုင်ရန်ဤအခွင့်အရေးများရှိရမည်
သင်သဘောတူပါကသင်၏ဆောင်းပါး / ပို့စ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ write4seoulofkorea@gmail.com.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! Saerang Haey Yo!